Nagu Saabsan - NINGBO BOLT MACHINERY XULASHADA & Teknolojiyada CO., Ltd
Shirkadeena, NINGBO BOLT MACHINERY ELECTRONICS & TECHNOLOGY CO., Ltd. waa soo saare xirfadle oo kuyaala Shiinaha kuna takhasusay soo saarista burushka hawada, kuwa yar yar ee hawada iska buufiyo, qoryaha buufin, xirmo hawo hawo ah iyo aalado kale oo hawo ah.
In kabadan 15 sano oo waayo-aragnimo ah oo qadkaan ah, hadda waxaan u dhoofsanahay adduunka oo dhan.
Warshadu waxay daboolaysaa dhul gaaraya 20,000 ㎡ dhul, waxay ka kooban tahay shaqaale xirfad leh oo ay weheliso wax soo saar heer sare ah iyo qalab tijaabo oo fiican. Waxaan ku siinaynaa badeecada tayo sare leh qiimo macquul ah iyo adeeg daacadnimo ah.
Warshadeena waxaa ka shaqeeya 88 shaqaale, awooddeenna waa 30,000 oo nooc oo ah qalabka qurxinta iyo 50,000pcs oo culeysyo hawada ah iyo 30,000pcs oo ah qalabka yar yar ee hawada.
Shirkadda ku taal magaalada dekedaha caanka ah - Ningbo. Alaabooyinkeenna waxaa oggolaaday sharuudaha CE & GS waxayna helayaan alaabo badan oo badeecooyin ah. Alaabooyinkeenna ayaa si gaar ah ugu habboon nooca loo yaqaan 'Airbrush tanning, tattoo, make-up, t-shirt airbrush', naqshadeynta farshaxanka, buufinta xayeysiinta, iyo wixii la mid ah.